USB Njikọta Ma Lugs Manufacturers na Suppliers | China USB Njikọta Ma Lugs Factory
The ala voltaji cable njikọta (ndị ọzọ na-akpọ cable uwe) e mepụtara maka eletriki nkesa na ike e nke 1 kV. Jera akara nyochara a nnukwu dịgasị iche iche nke ala voltaji njikọ, na dị iche iche ná mgbakọ na usoro nke na-arụ ọrụ. Anyị emejuputa kacha adabara cable jointing ngwa maka nzube nke nchupu na njikọ nke nnyefe edoghi
Anyị nwere ndị na-esonụ iche nke cable njikọta na ngwa:
* Shea isi bolt njikọta
* Nga gwara mmanụ aka uwe
All USB njikọta na-adabara aluminum na ọla kọpa na-eduzi, nke dị iche iche nha na dị iche iche wiring owuwu dị ka tọrọ atọ eduzi, siri ike, gburugburu.
The ala voltaji cable lugs na-eji cable eduzi na eletriki edoghi nke 1 kV. Jera emewo nnyocha a dịgasị iche iche nke cable lugs, nke ọtụtụ rụrụ na principals ọrụ na mepụtara kacha adabara maka nzube nke nchupu na njikọ nke nnyefe akara.
Anyị nwere ndị na-esonụ ụdị nke cable lug:
* Shea isi bolt cable lugs
* Nga gwara mmanụ lug
USB lugs na-adabara Aluminium na ọla kọpa na-eduzi, nke dị iche iche nha na dị iche iche wiring owuwu nke na-eduzi ya ka tọrọ atọ eduzi, siri ike ma gbaa gburugburu.
The kasị nkịtị nha n'ihi shiee isi bolt cable lugs bụ 10 na 240 mm2, n'ihi na tupu-gwara mmanụ cable lugs bụ 10 95 mm2. Atụmatụ ndị a ka anyị na-enye gị ọtụtụ dechara ngwaahịa nso maka dịgasị iche iche ma ọ bụ Gịnị.
Anyị na-emepụta shiee isi cable lugs elu ike, corrosion eguzogide aluminum ihe.
Nga gwara mmanụ Bimetal uwe njikọ MJPB
Nga gwara mmanụ Bimetal njikọ, MJPTN
Nga gwara mmanụ Bimetal njikọ, MJPT